I-Goa yeVeki yeTekethi yokuTyelela kweeVeki ezihamba phambili Uqhagamshelwano lokuLungisa: + 91-993-702-7574
Iphakheji ye-Goa yeveki yeTekethi
Umbuso waselwandle lwaseIndiya, iGoa, yenye yezona zihamba zihamba phambili ezihamba phambili. I-Goa Weekend Tour Package inikeza uhambo oluphumayo oluya kwinqanaba elihle unokuluxabisa ubomi bakho bonke. Izibhendi ezizimeleyo, impembelelo yekoloniyali kwindlela yokuphila kunye nobusuku obushushu busika ziimpawu ezibalulekileyo ezenza iGoa ibe yintandokazi. Indlela yokuphila kunye nenkcubeko yale ndawo emangalisayo iya kukuphazamisa. Emva kweveki ende, olu hambo luya kukuhlaziya kwaye lunike nekhefu eliyimfuneko ukusuka kwindlela yokuphila ephilileyo. I-Goa yeveki ye-Tour yePakethi iya kuluhlula ngeveki. I-Goa yindawo ekuphumayo ehamba phambili kubahambi abakhangela indawo eya kuyo ukuze banandiphe ikhefu eliphumayo nelinomdla. Indawo ekuya kuyo ikhethwa kwakhona ukuya kwindawo yokunyuka. Ukhetho lwemidlalo yamanzi lufumaneka nakwizibini ezimbalwa. Ubomi bobusuku buyimpawu ebalulekileyo eyenza iGoa kwenzeke kwindawo yokuya kuyo. I-Goa Weekend Tour Package ikunika ithuba lokuzibonela ngonyango olufunekayo kakhulu elunxwemeni phantsi kwelanga elikhanyayo kwaye uphile ngobomi bakho ebusuku. Enyanisweni, akukhona nje ngamabhishi, iindawo eziqhelekileyo, ulwandle lwaseArabhiya kunye nama-sunsets asekhazimulayo. Ukutyelela iGoa ukuzibona ngokwakho ngePakethi yeTekethi yeTyeveki yeGoa. Uya kumangaliswa yimbali, inkcubeko kunye nezithethe ezithonywe ngamawaka eminyaka yolawulo lwesiPutukezi kunye nenxaxheba ephambili ngexesha legolide lezorhwebo. Tyelela i-Goa ukuze ufumane kwakhona.
Ikhowudi yoKhenketho: 032 | Iprogram ye-03 Nights
USUKU 01: UKUPHELA KWI-GOA
Fika kwi-Goa, iDabolim Airport / iSiteshi seTrost Station kunye nokudluliselwa kwiRafa. Ukufika kokungena kwi-Resort kwiNkcazo elandelwa yiNxila engeNxilisayo yokuTywala, iSikhuphu seSiqhamo. Ukutya isidlo kwiRafa.
USUKU 02: KWI-GOA
Isibhedlele eKhotyana elandelwe ngokutyelela iNxweme yaseNorth Goa- Baga, i-Calangute Beach, i-Fort Aguada, i-Sinquerim Ngobusuku buyela kwi-Resort. (9.00 kum 6.00 pm). Ukutya isidlo kwiRafa.
USUKU 03: KWI-GOA
Ikhefu leNqanawa elandelwa yiTyelelo le-South Goa- Big Foot, i-Spice Garden, iThempeli le-Shanta Durga (Ponda), iTempile yaseSri Mangueshi (Ponda), iSonto laseSt. Francis Xavier (i-Old Goa), i-Miramar Beach, i-Dona Paula (ukhetho). Ngobusuku buyele kwiNqabileyo (9.00 ukuya kwi-6.00 pm) .Sebenzi kwiRekethi.
USUKU 04: SUSELA I-GOA
Emva kwesidlo sakusasa, uthumele kwiSikhululo se-Dabolim Airport / iMadgaon Railway ukuhamba.